Great Barrier Reef သည် "terminal အခြေအနေ" တွင်ရှိသည် ကွန်ယက်မိုးလေဝသ
Great Barrier Reef သည်» terminal အခြေအနေ»တွင်ရှိသည်
The Great Barrier Reef သည်မကြာသေးမီအချိန်အထိလူနေမှုပုံစံအမျိုးမျိုးရှိသည့်အတွက်အလွန်လှပသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးအလွန်ခက်ခဲသောအခြေအနေကိုဖြတ်သန်းနေရသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များအဆိုအရ ရာပေါင်းများစွာသောကီလိုမီတာသန္တာကိုပြန်လည်မတွေ့ရှိနိုင်ပါ.
သန္တာကျောက်ချည်သုတ်ခြင်းသည်ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း၏အကျိုးဆက်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်ပင်လယ်ရေ၏အပူချိန်တိုးလာခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီဟာဆက်ဖြစ်တယ်၊ ယူနက်စကိုကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာအဖြစ်ကြေငြာခဲ့သည့်နေရာများထဲမှတစ်ခုမှာပျောက်ကွယ်သွားနိုင်သည်.
ကျွမ်းကျင်သူ Jon Brodie ကသြစတြေးလျစာစောင်တွင်ဖော်ပြထားသည် အုပ်ထိန်းသူ Que သန္တာ terminal ကိုပြည်နယ်၌ရှိကြ၏။ သန္တာကျောက်များအကြီးအကျယ်အရောင်ချွတ်ခြင်းကိုခံစားခဲ့ရသည့်ပထမဆုံးအကြိမ်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်မကြာသေးမီကပြုခဲ့သည့်အတိုင်းပြန်လည်ထူထောင်ရန်နှစ်ပေါင်းများစွာအမြဲတမ်းရှိခဲ့သည်။ ၁၉၉၈ နှင့် ၂၀၀၂ ခုနှစ်များအတွင်းသူတို့သည်ဆိုးဝါးသောအချိန်ရှိခဲ့သော်လည်း ၂၀၁၆ ခုနှစ်အထိထိုအဖြစ်အပျက်ကိုနောက်တဖန်မကြုံတွေ့ခဲ့ပါ။ ထိုအချိန်မှစ၍ ၎င်းတို့သည်ပုံမှန်အခြေအနေသို့ပြန်ရန်အချိန်မရခဲ့ကြပါ။
»အလျင်မြန်ဆုံးကြီးထွားလာသောသန္တာကျောက်များကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်အနည်းဆုံးဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာသည် ၁၂ လခြား။ အစုလိုက်အပြုံလိုက်အရောင်ချွတ်သည့်အဖြစ်အပျက်များသည်ကျောက်တန်းများပြန်လည်ထူထောင်ရန်အလားအလာလုံးဝမရှိပါ ကြောင်း 2016 ခုနှစ်တွင်ပျက်စီးခဲ့သည်ဂျိမ်းစ်ကယ်ရီကဂျိမ်းစ်ကွတ်တက္ကသိုလ် (သြစတြေးလျ) မှရေကြောင်းဇီဝဗေဒပညာရှင်ကိုရှင်းပြခဲ့သည်။
ဒီတော့ဝေး, 1500 ကီလိုမီတာသန္တာအရောင်ချွတ်ပြီ; တောင်ပိုင်းအပိုင်းသာအတော်လေးကျန်းမာသည်။ ဗဟိုဇုန်တွင်သေဆုံးမှုနှုန်းမှာ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိသည်ဟု Coral Reef လေ့လာရေးစင်တာမှဒါရိုက်တာတယ်ရီ Hughes ကပြောကြားခဲ့သည်။
သိပ္ပံပညာရှင်များအတွက် ဒီအရောင်ချွတ်၏အကြောင်းရင်းကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သော ၁၉ နှစ်ကတစ်တန်းတက်ခြင်းသည်အဖြစ်အပျက်လေးခုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟု Hughes ကပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းကိုရပ်တန့်ရန်အရေးယူခြင်းမရှိပါကသန္တာအားလုံးသည်ပျောက်ကွယ်သွားဖွယ်ရှိသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေဝသ » ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း » Great Barrier Reef သည်» terminal အခြေအနေ»တွင်ရှိသည်